MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: အပြစ်မဲ့သူများကို ပုဒ်မ မျိုးစုံတပ်၍ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်
၃၁၆၂/၁၃ ၃၃၂ ,၄၄၇,၁၄၃ ၂နှစ်
၃၁၆၃/၁၃ ၂၉၅,၂၉၅(က),၁၁၇ ၂နှစ်
၃၁၆၄/၁၃ ၂၉၅ ,၂၉၅(က) ၁၁၇ ၂နှစ်
၃၁၆၅/၁၃ ၁၁၃ ၁နှစ်
၃၁၆၆ /၁၃ ၁၁၇ ၁နှစ်
၃၁၆၇ /၁၃ ၁၈ အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၆လ
၃၁၀၃/ ၁၃ ၁၄၃ ,၁၄၇ , ၅၀၀ ၁နှစ်
၃၁၀၆/၁၃ ၄၄၇ ,၁၄၇, ၁၄၃ အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၆လ
ယခုကဲ့သို့ အပြစ်မဲ့သူများကို ပုဒ်မ မျိုးစုံတပ်၍ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဥပဒေသည် ပြည်သူတို့ကို လုံခြုံမှု့ပေးပါသလား။
I heard about Aung Soe is sentenced 11 1/2 years in prison.Please help '' FREE AUNG SOE''.other2farmers are sentenced21/2 years in prisons tearms,PLEASE HELP THEM TO FREE NOW!.
Free Aung Soe! Aung Soe one of Burma's political prisoners. He is an activist who was arrested for his part organising protests with farmers to plough land that had been confiscated by the Burmese government for the Letpadaung copper mine project. Please take action to free him here: http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/campaigns/actions/free-political-prisoners/no-political-prisoner-left-behind
The Burma Campaign - for human rights, democracy and development in Burma
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အတိလင်းမရှိသော လက်ရှိအစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျော်လွန်ပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတာကိုရပ်တန်းကရပ်သင့်ပါတယ်။ ယနေ့မဆီမဆိုင်အဖမ်းခံနေကြရသူများတရားမျှတမှု မရှိခြင်းများမည်သို့ပင်ဟန်ဆောင်ပြုံးပြနေပါသော်လည်းရွှေရည်စိမ်ဒီမိုကရေစီအတွက်ရင်လေးမိပါ တယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တရားရေးမဏ္ဍိုင်မှဆောင်ရွက်နေပါသည်ဟုဆိုပါသော်လည်း ကိုယ်လိုရာကိုယူပြီးပုဒ်မများကိုတပ်ချင်သလိုတပ်နေပြီး စစ်တပ်အကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ကြီးများ ဤမျှ ချမ်းသာနေကြသည်ကိုတော့ စစ်ဆေးရန် မသိကျိုးကျွံ ပြုနေကြတယ်။ဥပဒေမရှိသယောင် မေ့ထားကြ တယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံး လမ်းပြပေးနေသော အစိုးရတရပ် အနေဖြင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးများကို နားလည်ပေးနိုင်ရမည်၊ အခွင့်အရေးများ ပေးနိုင်ရမည်။ ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကပင် ဒီမိုကရေစီ၏ စံနှုန်းများအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနေရတော့မည်။ ထိုသို့မှ မဟုတ်လျှင်တော့ ၄င်းတို့ စီစဉ်ပေးထားသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟူသည် နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာပန်းလှအောင် ဟန်ပြလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာ ပိုင်ရှင် ဟာ ပြည်သူ ဖြစ် တယ် လို့ ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထု အပေါ် တရာသူကြီးတွေ ဥပဒေကို ကြိုက်သလို အဓိပ္မါယ် ဖွင်ပြီး လုပ်စားနေတာ၊ ပြည်သူ တရပ်လုံး လည်စင်း ခံနေ ရတာ ကြာပါပြီ။ တရား ရုံးတွေ က တရားလက်လွတ် စီရင် တာတွေ ကို ပြည်သူ လူထု ဘက်က ရပ်တည်ပြီး အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စီစစ်၊ စစ်ဆေးဘို့ အဖြစ်ပျက် မှန်တွေ ကို မေးမြန်းပေး ဘို့အဖွဲ့ အစည်းဆိုတာလည်းမရှိသေးပါ ဘူး။ ပြည်သူ လူထုရဲ့ အခွင့်အရေးများ ဟာ ဆုံးရှုံးနစ်နာ လျှက် ဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့ ပေါင်းပြီး ဥပဒေ က မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ပြည်သူလူထုကို အထက်စီး က နိုင်လိုမင်းထက် ဆက်ဆံ နေတာစည်းကမ်းချက်များ၊ ဥပဒေများ၊ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ဟာ အထက်အရာရှိကြီးများနှင့် မဆိုင်ဘဲ လက်အောက် ငယ်သားများအတွက်သာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အထက်အရာရှိများအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားများကျူးလွန်သည်ကျတော့ရှိစေ။အောက်ခြေကလူတွေ ကျတော့ဥပဒေ ဆိုတဲ့စနစ် ကိုတိုက်ဖျက်ပစ်ရပါ မယ်။တရားမျှတမှုနှင့် အာဏာ ဆိုတာဟာ တစ်သီးတခြားစီ ဖြစ်နေပါတယ်။ဥပဒေ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဥပဒေကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရာမှာ လူထုအကျိုးစီးပွားထက် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲဆိုသူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုသာ အဓိကထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ နှင့် ဥပဒေရေးဆွဲနေသမျှ ကာလပါတ်လုံး တရားမျှတမှု ဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တရားမျှတမှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အာဏာဆိုတာ ဒွန်တွဲနေတာပါ။
ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းစာရင်းတွေကောက်ယူဖိုကျတော့ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတွေ ခိုးစားဖွက်စားတာ တွေပေါ်မှာစိုးလို့ဝိုင်းပြီး ကာကွယ်နေကြတာလေ။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်း (ဗိုလ်မှုးချုပ်ဟောင်း) နေအိမ်မှာကန်ဒေါ်လာ၂သန်းပါသော လက်ဆွဲအိတ်တခု သူ၏နေအိမ်တွင် သိမ်းဆည်းရ မိခဲ့တယ်တဲ့။ ဒေါ်လာသန်းချီ အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း သိန်းထွန်း ဘာကြောင့် အရေးယူ မခံရတာလဲ။ အရင် စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးစိုးသိန်း(အခု သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး) မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ဆိုတဲ့ ဥက္ကဌထိုင်ခုံမှာ အမြိုင့်သားထိုင်ရင်း၂၀၀၉-၂၀၁၀ လောက်တုန်းက မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကနေ အမြတ်ငွေကို ၂ဆကျော်လောက်စာရင်းလိမ်ပြခိုင်းတဲ့ကိစ္စ တာတာကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ၁၀ ဘီးကားတွေ တစ်နှစ်ကို အစီးရေ (၁၀၀)ထုတ်ဖို့မကွေးမှာ စက်ရုံတည်တော့ ကားပစ္စည်းအစိတ် အပိုင်းတွေကို ဆေးစိမ်တဲ့စက်ဝယ်တော့ အဲဒီစက်တန်ဘိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇)သန်းလောက် ကဘယ်ပျောက်သွားလဲ။၂၀၀၅ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်က အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးရီရဲ့ နေအိမ်မှာ အိမ်ဖော်ကလေးမလေး တစ်ယောက်ကို ဂေါက်တံနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်သတ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့အလောင်းကို ဖျောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှု မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြန့်ချီရောင်းဝယ်ရေး ပြုလုပ်နေတဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ရဲ့ သား အောင်ဇော်ရဲမြင့်ကိုတောင် ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်မပေးဘဲ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကာကွယ်ပေးနေကြပါတယ်။
မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဦးဖုန်းဇော်ဟန်ဆိုရင်လည်း ကတ္တရာသွင်းရန်တွက် ကြိုတင်ငွေ သိန်း(၄၀၀၀) စည်ပင်ပိုင်ငွေကို ယောက်ဖအား ကြိုတင်ပေးပြီး ထိုငွေဖြင့် ၀ယ်သောကတ္တရာများကို အမြတ်တင်ပြီးစည်ပင်သို့ပြန်သွင်းခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု။ ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ဓါးနဲ့ ထိုးမသတ်ဘဲ သေနတ်နှင့် ပစ်ချင်တိုင်း ပစ်ပြီး ကားမောင်းထွက်သွားခဲ့တဲ့ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု။ ဤသို့ ဥပဒေကိုအလွဲ သုံးစားပြုလုပ်သည့် ကိစ္စများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်နေသည်ကို မည်သူ တရားစီရင်ပါမည်နည်း။
နအဖစနစ်တကျ မွေးမြူထားတဲ့ ရဲ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အကျင့်ပျက် လာဒ်စားမှု အောက်မှာသာ မွေ့ပျော်နေကြရပြီး ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု ရုံးတင်တရားစွဲခံနေရသော သူတို့အားလုံး အထဲတွင် အချို့သည် ဘာပြစ်မှုမှ ကျူးလွန်သူများ မဟုတ်။ အများစုသော လူဆင်းရဲ ဥာဏ်နဲ ငမွဲတို့အတွက် ထွက်လမ်း လွတ်လမ်း တိုးတက်လမ်း အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော အပြစ် မရှိသော နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ လူငယ် လူရွယ် တို့ကို ယနေ့ခေတ်၏ တရားစီရင်ရေး စနစ်အတွင်း အဖမ်းခံ လာကြရရှာသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတို့ ဖေါက်ဖျက် ကျူးလွန်သည် ဆိုသော ပြစ်မှုတို့မှာ ဘယ်နိုင်ငံသား ဘယ်အိမ်နီးချင်း ဘယ်မိတ်ဆွေ ကိုမှ မထိခိုက် …..လိမ်ခြင်း ညာခြင်း အလျင်း မရှိ။ ခိုးခြင်း ရက်စက်ကောက်ကျစ်ခြင်း။ အောက်တန်းကျခြင်း အလျှင်းမရှိပါ။နိုင်ငံရေးတွင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့သည် ခိုးတတ် ဖွက်တတ် လူသတ်တတ်သော လူတို့နှင့် တန်းတူ သံတိုင်တွေနောက် သံခြေကျင်းတွေ အခတ်ခံကာ ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာ နေကြရပါတယ်။ သို့သော်ငြား နိုင်ငံရေးလှူပ်ရှားသူတို့ မျက်နှာသည်ကား မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည် တဖျတ်ဖျတ် ။ စိတ်ဓါတ် ကျသည့်ဟန် မတွေ့၊ အားလျော့မည့်ပုံ မပေါ်။ သူတို့သည် တကယ့် မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာကို အကောင်အထည်ဖော် မည့် ကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း အစီအရင်ခံစာအတိုင်း တချို့အချက်တွေက သူတို့ ဆောင်ရွက်ပေးထားတာတွေ မရှိပါဘူး ။ စာချုပ်အသစ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေလည်း ဒေသခံတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ဘာမှ ချပြ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွေ၊ လူမှုစီးပွား ထိခိုက်မှုတွေအတွက် ဒေသခံတွေကို ကောင်းကျိုးပေးသလား၊ ဆိုးကျိုး ပေး သလား ဆိုတာတွေလည်း ရှင်းလင်းပြောပြခြင်း မရှိပါဘူး။ ဦးပိုင် နှင့် ၀မ်ပေါင်ကဒေသခံများ၏ သဘောထား ဆန္ဒကို အလေးမထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ မြေယာနှင့် သီးနှံ လျော်ကြေး လက်ခံသူများသည် စီမံကိန်း အဆောက်အအုံ မြေနေရာများမှဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း နယ်မြေ တွင်းက ဒေသခံ ၃ ပုံ ၂ ပုံသည် လျော်ကြေးငွေများ လက်ခံထားမှုမရှိပါဘူး။
ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီကိုလည်း မတ်လ ၁၁ ရက်ကပင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးလှထွန်း၊ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ၂ ဦးအဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး နှင့် ဦးပိုင်တာဝန်ခံ စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို အပါအ၀င် စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦိးပါဝင်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်သူ၊ ကိုယ်ယုံကြည်သက်ဝင်သူ များကိုသာ တာဝန်ပေးနေလျှင် တကယ် အရည်အချင်း မြင့်သူများ အထူးလိုအပ်နေသော ယခုအချိန်မျိုးတွင် တိုင်းပြည်အတွက် အထူးနစ်နာပါလိမ့်ယ်။
အခုလည်းမြစ်ဆုံ ရေကာတာ စီမံကိန်းနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ ခွင့်ပြုချက် တောင်းချင်တယ်လို့ စီမံကိန်းတွေ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီနဲ့ China Power Investment Corporation (CPI) ကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် မြန်မာမီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကို စော်ကားလိုက်ခြင်းပါဘဲ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တရုတ် – မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ CPI ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀၀၀ နဲ့ ဦးဆောင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့တာပါ၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှု ကြောင့် သူ့ရဲ့ သမ္မတ သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ခေါင်းရှောင်၊ ခေါင်းလွှဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အချိန်မှီ ချမှတ်မပေး၊ ပြဿနာဖြစ်လာရင်ခေါင်းရှောင်ပြီး ငွေအချိုအချောင်နှိုက်နည်းဗျူဟာကို ကျွမ်းကျင်စွာပင်တတ်မြောက်ကြပါတယ်။ သေနတ်ကို မိုးပေါ်မပစ်တဲ့ အမျိုးပီပီ ပိုက်ဆံကို မိုးပေါ်မပစ်ပါ။ ရှိသမျှ အိတ်ထဲကို သိမ်းကျုံးထည့်ပြည်သူ့ချွေးနှဲစာတွေကို မတရားသဖြင့် ပက်ပက်စက်စက် တောင်းရမ်း စားသောက်နေကြတာ နှစ်ပေါင်းလဲမနဲတော့ပါဘူး။တာဝန်မယူဘဲ လက်အောက်ကို လွှဲချဖို့၊ ဖိနှိပ်ဖို့၊ နှိပ်ကွပ်ဖို့နှင့် ထုတ်ပြန်ထားသော၊ ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ၊ ကျင့်ဝတ်များသည်လည်း ပျောက်ဆုံးနေပြီးစည်းကမ်းရှိသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရမည်ဟုဆိုကာ စည်းကမ်းချက်များ၊ ဥပဒေများ၊ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ခမ်းခမ်းနားနား ပြဌာန်းခဲ့သော်လည်း၎င်းဥပဒေများသည် အာဏာရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လားလားမျှမဆိုင်ဘဲ မဆိုင်ဘဲ လက်အောက် ငယ်သားများအတွက်သာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ အဓိက အကျဆုံး အချက်က တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ လူထုလူတန်းစားအသီးသီးအတွက် တူညီတဲ့ အခွင့်အရေး၊ ရပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ တဦး၊ တယောက်၊ တစု၊ တဖွဲ့၊ လူတန်းစား တရပ်အတွက် အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေရင် ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်ဆိုနှိုင်ပါဦးမလား။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ တရားမျှတမှုပေါ်မှာအခြေတည်မယ် လို့ လေးနက်စွာ ယုံကြည်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်အတွက် ကန့်ကွက်ဖို့ လိုသလို ပြည်သူတွေအပ်နှင်းထားတဲ့ လွှတ်တော်ကလည်း ဒီကိစ္စကိုအလေးအ နက်ထား စဉ်းစားကာကွယ်သင့်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် ရဲ့တာဝန်ဟာ အမှုကိစ္စတွေနဲ့စပ်လျဉ်း ပြီး ဥပဒေပြဿနာ အငြင်းပွားမှုရှိလာခဲ့ရင် စီရင်ထုံးဖွဲ့ ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ခွင့် အာဏာအပ်နှင်းခံထားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Democracy နီုင်ငံရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဒိမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော် ကနေပြီး ပြတ်ပြတ် သားသား ရပ်တည်ရပါတယ်။ ဥပဒေဆိုတာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်တဲ့သူကိုထောင်ထဲထည့်ဖို့ထက်အပြစ်မဲ့တဲ့သူကိုထောင်ထဲမထည့်ဖို့ ကိုဦးစားပေးရတယ်(ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုပါ)။မြန်မာပြည်ကလူကိုခင်ရင်မူကိုပြင်တယ်..လူကိုမုန်းရင်မူကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့..အကျင့်တွေကို ပြုပြင်သင့်ပါပြီ။
at 7/10/2013 10:32:00 AM